Ikhulu lika-Brand lihlele ukunqoba kwe-USSA
Ikhulu elitholwe u-Niel Brand lihlule ikhulu la-Janneman Malan njengoba i-University Sports South Africa (USSA) inqobe ngama-runs amabili behlula iqembu le-South Africa Emerging kumdlalo wesine we-One-Day Triangular Series ePitoli ngoLwesine.
Emuva kokunqoba i-toss nokushwiba kuqala, iqembu le-Emerging lihlanganise u-297 kuphume abayisikhombisa kuma-overs awu-50 enkundleni. Kuhole u-Brand ngokuthola u-100 emabholeni awu-124, okubalwa khona o-four abayisithupha no-six ababili.
Othole ama-runs amaningi u-Malan, ushaye o-six abane no-four abayisishagalombili emabholeni awu-88 ukuze athole u-108. Kodwa ukunqoba kuphambi kwabo, u-Gideon Peters (2/61) no-Delano Potgieter (1/30) baphisane ngama-runs awu-12 kuphela kuma-overs okugcina amabili ukunqobela i-USSA, okokuqala kumqhudelwano.
Manje banamaphuzu amane etafuleni, ngephuzu elilodwa ngemuva kwe-SA Emerging, abanqoba ngephuzu elinezeliwe behlangana okokuqala, kwathi i-Sri Lanka Emerging ingaphezulu benqobe kabili emidlalweni embili – namaphuzu ayisishagalolunye.
Iqembu leNyuvesi lizoyithanda indlela abadlalengayo ngoLwesine, nokho, bekuhola u-Brand kanye nabanye abadlali abasebenze kahle. Emuva kokuthi u-Marco Jansen (3/54) no-Dayyaan Galiem (2/52) bakhiphe u-Isma-eel Gafieldien (0) no-Kabelo Sekhukhune (15), ama-runs awu-39 atholwe u-Hanno Kotze no-Ruan de Swardt bagcine izinto zihlangene, waphinde wathola u-50 omuhle u-Potgieter, oshaye u-70 (66 balls, 6 fours, 3 sixes).
Abashaye ama-runs amakhulu baphinde benza inhlanganiso yama-runs awu-116 ngenti yesine ukunyusa iqembu labo kumphumela oqinile. Usheshe waphuma u-Tony de Zorzi (5) kuqala i-innings ye-SA Emerging, kodwa u-Malan no-Raynard van Tonder (71 emabholeni awu-102, 6 fours) bahlanganise u-172 ngenti yesibili ukushiya iqembu labo lihamba phambili.
Iqembu ebelijaha liqhubekile nencindezi ngenxa ka-Jason Smith othole u-56 emabholeni awu-59 (2 fours, 1 six) no-40 oshaywe u-Matthew Breetzke.
Kodwa u-289 kuphume abathathu nge-over engaphambi yokugcina, bakhishwe u-Peters no-Potgieter, bagcina ku-295 kuphume abayisithupha.
Ntini takes five in SA Emerging loss to Sri Lanka Massive opportunity for Emerging Squad, says Conrad CSA announces squad and fixtures for Sri Lanka Emerging Tour Sri Lanka Emerging complete come from behind victory De Zorzi and Rickelton open Emerging Squad Tour with century stand De Zorzi to lead SA Emerging Squad in Sri Lanka Bangladesh make strong start to tour Simmonds stars as SA Emerging complete Zimbabwe 'A' clean sweep Malan ton, Pretorius five-for power Emerging team to opening one-day win Malan, Pretorius power Emerging team to opening one-day win Emerging team ready for Zimbabwe one-day series